Shirkad lagu magacaabo SHS oo lacago dheeraad ah ku soo rogtay dadka ka dhoofaya Garoonka Mudisho!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Shirkad lagu magacaabo SHS oo lacago dheeraad ah ku soo rogtay dadka ka dhoofaya Garoonka Mudisho!!
Shirkad lagu magacaabo SHS oo lacago dheeraad ah ku soo rogtay dadka ka dhoofaya Garoonka Mudisho!!
Shirkad lagu magacaabo Sahal Hosbitality Services oo dhowaan bilowday in Basas uga qaado agagaarka Isgoyska KM4 dadka ka dhoofaya Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lacago ku soo rogtay rakaabka ka dhoofaya garoonka, iyadoo lacagahan ay ka baxsan yihiin Ticket-ka shirkadaha diyaaradaha.
Shirkadan oo markii hore adeegeeda ku bilowday si lacag la’aan ah in dadka Basas uga qaado xarun ay ku leedahay meel u dhow halka Ciidamada Nabadsugida u taalo Koontaroolka agagaarka isgoyska KM4 una geyneyso garoonka diyaaradaha Muqdisho sababo amni awgeed ayaa maanta la soo baxday waji cusub, iyadoo lacago ku soo rogtay Dadka rakaabka.
Dadka galaya xaruntaas shirkadda basaska Dadka lugu qaado oo Garaash gooni ah ayna maraya baaritaan adag iyo agabka ay wataan, waxaana baaraya Eeyo, waxaana intaas kadib loo dirayaa meel laga goosto Ticket lagu raaco Baska, halkaasoo lagu fiirinayo Ticket-ka diyaaradda uu raacayo gudaha iyo dibadda.
Shirkaddan ayaa si lama filaan ah dhuu-dhuub dadka ku gashay, iyadoo markii hore dadka u sheegi jirtay in si lacag la’aan ah dadka basaska ku raacayaan, loona geynayo garoonka diyaaradaha, lagana soo qaadayo.
Previous PostDaawo MUUQAAL: Khasaarihii ugu Badnaa oo ka dhashay dagaalkii maanta kadhacay Gaalkacyo !! Next PostWararkii Ugu Dambeeyay dagaalka Gaalkacyo iyo Qasaaraha ka dhashay oo sii kordhaya!!